Daanish Reefuujii Kaawunsil(DRC) fi Internaashinaal Reeskiwu Komitee(IRC) kan jedhaman sababa lola adeemaa tureen hojjettootni isaanii Tigraay keessatti ajjeefamuu ibsaniiru.
Daanish Reefuujii Kaawunsil ji'a darbe kana keessa hojjettoonni isaa sadii Tigraay keessatti ajjeefamuu yoo ibsu, Internaashinaal Reeskiwu Komitee (IRC)n ammoo magaala Shiree buufata baqattootaa Haatseetse jedhamu keessa kan hojjetu hojjetaan isaa tokko ajjeefamuu gabaasaniiru.
Internaashinaal Reeskiwu Komitee(IRC) gama isaan hojjetaan isaa naannichatti kan ajjeefame Sadaasa 19 osoo waraanni motummaa magaalattii hin to'atiin guyyoota 2n dura akka ta'e himeera.
IRC'n akkaataa ajjeechaa hojjetaa isaa kanaa odeeffannoo dabalataa argachuufi qorachuuf tajaajilli bilbilaa adda citee jiraachuun isa rakkisuu ibseera.
Mootummaan kanarratti waan jedhe qabaa?
Torbee tokko dura gaaffiifi deebii BBC waliin taasisan irratti dhimma kanarratti odeeffannoo mootummaan Itoophiyaa qabu kan gaafataman Ministirri Ijaarsa Dimookrasii Obbo Zaadiig Abrahaa ''amma dhimma kanarratti wantiin beeku hin jiru, gabaasichi qulqullaa'aa kan jiru yoo ta'u, tajaajila bilbilaa deebisaa, daandiis sirreessaa jirra'' jedhanii ture.
Dubbii himaan labsii yeroo muddammaa naannoo Tigraayfi Deetaan Ministiraa Ministeera Haajaa Alaa Amb. Reediwaan Huseen gama isaanitiin, ibsa Kibxata darbe gaazexessitootaaf kennanniin, hojjettoonni gargaarsaa irratti dhukkaafamuu kaan ammoo to'atamusaanii himanii ture.
Kunis sababii bakka imaluu hinqabneetti imalaniif, kanaafu qajeelafma motummaa dhagahu qabaatu jedhan.
Kana yoo ibsanis ''Hojjattooni deeggarsaa buufata sakatta'iinsaa lama humnaan cabsanii erga darbanii booda kan sadaffaa ce'uuf osoo jiranu itti dhukaafamee akka dhaabbatan taasifaman. Boodas to'annaa jala oolfamanii amma gadhiifamaniiru'' jedhan Amb Reediwaan.